Razer Phone for Gamers or Gamer Phone – REDPlayer
ဒီဖုန်းကိုတစ်ပတ်လောက်သုံးပြီးရင်တော့ တစ်ခြားဖုန်းပြန်သုံးတဲ့ အခါ စိတ်ဆင်းရဲရလိမ့်မယ်လို့ပြောသွားတယ်၊ အဲ့လူက Razer ရဲ့ Head of Mobile ဖြစ်သူ Tom Moss တဲ့ဗျာ။ ကျွန်တော့လက်ထဲမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၃ရက်လောက်ကမှ ဝယ်ထားမိတဲ့ OnePlus တစ်လုံးရှိတယ်၊ PC မှာတွဲထားတဲ့ Razer အစိတ်အပိုင်းတွေတလှည့် OnePlus တစ်လှည့်ကြည့်ရင်း ခေါင်းထဲချက်ချင်းဝင်လာတဲ့ အတွေးတစ်ခုက “ဟျောင့်…ဒါ Razer ကထုတ်တာနော်” ဆိုတာခေါင်းထဲရောက်လာတာပဲ။
ရုပ်ထွက်ကတော့ပုံကြည့်လိုက်တာနဲ့သိသာပါတယ်၊ iphone, OnePlus , Samsung S8, vivo, Mi5 ဘာညာကြည့်လိုက်၊ အနားလုံးပြီးသား ခန့်ညားနေလိုက်တာ၊ သူ့ကြည့်တော့ အုတ်ခဲချပ်ကြီးကျနေတာပဲ။ ဘာမှတွန့်တက် ကွေးနေတာတွေမပါဘူး။ ok လေ၊ ကြိုက်တယ်။ နောက်တစ်ချက် – 5.7in မှာ 2560 x 1440 resolution ထွက်တယ်ဆိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေက ကိုယ့် PC တွေထက် ပိုများနေတယ်။ ok – ဒါလည်းကြိုက်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် စကာပေါက်အကြီးကြီးပါလာတယ်၊ တစ်ခုမဟုတ်ဘူး၊ ၂ ခု၊ အပေါ်နဲ့ အောက်မှာ။ ဒါကတော့ဘာလဲမသိ၊ ဘယ်သူမှ အဲ့လိုကိစ္စတွေမသုံးတော့ဘူးမဟုတ်လား။ ဒါတော့များသွားပြီ၊ အုတ်ခဲရုပ်ထွက်နေတာကဖြစ်တယ် ဘာလို့စကာပေါက်တွေ သုံးနေတုန်းလဲ? ထားပါတော့ အရေးကြီးတာကအထဲကပစ္စည်းတွေမဟုတ်လား။
သူ့မှာ refresh rate 120 ပါလာတယ်၊ woww….ဒါက PC ဒါမှမဟုတ် iPad Pro ဖြစ်နေပြီ။ ပြီးတော့ Nvidia G-Sync လိုပဲအလုပ်လုပ်ပေးတဲ့ Ultramotion ဆိုတာပါလာသေးတယ်။ ဒီတော့ refresh rate များများလိုတဲ့ gaming အတွက်ကတော့ အတော်လေးတက်လာတယ်ပေါ့။ 120Hz rate ရနေမှာတော့ အသံဘက်တစ်ချက်လှည့်ရအောင် ခုဏကစကာပေါက်က ခုမှသိတယ်၊ အဲ့ဒါ speaker တွေဗျ။ ဒီလောက်ကြီးမှာတော့ အသံကတော့ ကောင်းလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကစမ်းကြည့်မှသိတော့မှာ။ Personally ဆိုရင်တော့ speaker ကိုသိပ်စိတ်မဝင်စားဘူး။ headphone ပဲသုံးတာများပါတယ်။
8GB Ram ဆိုတဲ့ memory နဲ့ 4000mAh ပါတဲ့ battery ဆိုတော့ ဟုတ်ပြီ။ ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ အဆင်ပြေတယ်။ processor ကတော့ လူတိုင်းလိုလိုသုံးနေတဲ့ qualcomm snapdragon 835 ကိုသုံးပြီး သူကသူများတွေထက်ပိုအလုပ်လုပ်နိုင်မယ်ပြောတာပဲ။ သူပြောချင်တာက သူ့ရဲ့ laptop တွေမှာသုံးတဲ့ အပူဖယ်တဲ့ နည်းကိုသုံးထားတယ်ပြောတယ်။ heatpipe လည်းပါလာတယ်ပြောပါတယ်။ ဒါကတော့ သူများတွေလည်းဒီလိုပဲ ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာတွေရှိတယ်ပြောနေတာပဲမဟုတ်လား။ စကားမှန်မှန်က စစ်မှသိရတာပဲလေ။ နောက်ကိစ္စတွေကတော့ Android 7.1.1 Nougat နဲ့စရမှာဖြစ်ပြီးတော့ 12megapixel duel camera ပါမယ်၊ ၂ခုလုံးက wide angle lens နဲ့ 2x optical zoom ဖြစ်မှာပါ။ camera ကသိပ်တော့အရေးကြီးတယ်မဟုတ်ပေမယ့် နောက်ပိုင်း AR game တွေပါလာရင်တော့ ကောင်းကောင်းရှိထားတာမမှားပါဘူး။ အခုပဲ Walking dead ဘာညာရှိနေပြီမဟုတ်လား။
internal မှာ 64GB ပါဝင်ပြီး microSD slot မှာတော့ 2TB အထိရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သူလို့က Samsung galaxy S8 plus ပဲရှိဦးမယ်ထင်တယ်။ အချုပ်ပြောရရင်တော့ ဒီဖုန်းက လူတိုင်းအတွက်ရည်ရွယ်ပုံမရပါဘူး။ feature တွေက gamer တွေကြိုက်နိုင်လောက်အောင ပစ္စည်းတွေသွပ်ထားပေမယ့် လက်ရှိလူတွေရူးသွပ်စပြုနေတဲ့ fancy ကိစ္စတွေဘာမှမပါလာပါဘူး။
ခုဏက အပေါ်အောက်မှာပါဝင်လာတဲ့ စကာပေါက် speaker နေရာတွေကတော့ ဖုန်းကို လက်ကကိုင်ပြီးကစားတဲ့အခါ screen ကိုကွယ်မနေအောင် ကောင်းကောင်း အထောက်အကူပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက အဲ့ speaker ၂လုံးကြောင့် ပဲ ဒီဖုန်းက ရေစိုမခံပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက headphone အတွက် 35mm jack အပေါက်မပါလာတာပဲ။ အဲ့အတွက်သူ့မှာ USB C ကနေ 35mm jack ပေါက်ပြောင်းတဲ့ ကြိုးသေးလေးပါလာပါတယ်။ ရေစိုခံတာမခံတာကတော့ personal choice ဆိုပေမယ့် flagship phone တစ်ခုထုတ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒါက ဒီအချိန်မှာ given ဖြစ်သင့်နေပြီမဟုတ်လား။
ok- ဒါကတော့ ကျွန်တော်သိရသလောက်ပါပဲ။ fb page မှာ ကိုကျော်မျိုးနောင် ပြောသလိုပဲပေါ့။ first gen ဖြစ်နေတဲ့အတွက် နောက် gen ကိုစောင့်ရင်ကောင်းမလားလို့ဖြစ်မိတာတော့ အမှန်ပဲ။ ခက်တာက Tom Moss ပြောသလို ဒီဖုန်းကို ကျွန်တော် တစ်ပတ်လောက် မသုံးကြည့်ရသေးတာပဲ။ သိသလောက် data ကို တစ်ခြားလက်ထဲရှိနေတဲ့ ဖုန်း ၃လုံးနဲ့ ယှဉ်ပေးထားပါတယ်။ ဈေးနှုန်းက $699 နဲ့လာမယ့် ၁၇ရက်မှာစရောင်းမယ်ပြောပါတယ်။ ခုအချိန်မှာတော့ တစ်ချို့နိုင်ငံတွေမှာ ကြိုတင်မှာယူလို့ရနေပါပြီ။
Display size, resolution 5.72-inch; 2,560x1,440 pixels 5.8-inch; 2,436x1,125 pixels 6-inch; 2,880x1,440 pixels
Pixel density 514ppi 458ppi 538ppi
Dimensions (Inches) 6.2x3.1x0.31 in 5.7x2.79x0.30 in 6.2x3.0x0.3 in
Dimensions (Millimeters) 158.5x77.7x8 mm 143.6x70.9x7.7 mm 157.9x76.7x7.9 mm
Weight (Ounces, Grams) 6.95 oz; 197g 6.14 oz; 174g 6.17 oz; 175g
Mobile software Android 7.1.1 Nougat iOS 11 Android 8 Oreo
Camera Dual 12-megapixel (wide/zoom) Dual 12-megapixel 12-megapixel
Front-facing camera 8-megapixel 7-megapixel 8-megapixel
Video capture TBD 4K 4K
Processor Octa-core Qualcomm Snapdragon 835 Apple A11 Bionic Octa-core Qualcomm Snapdragon 835
Storage 64GB 64GB, 256GB 64GB, 128GB
RAM 8GB TBD 4GB
Expandable storage Up to 2TB None None
Battery 4,000mAh TBD 3,520mAh
Fingerprint sensor Power button None (Face ID via TrueDepth camera) Back cover
Connector USB-C Lightning USB-C
Special features 120Hz screen, dual front-facing stereo speakers with Dolby Atmos Water resistant (IP67), wireless Qi charge compatible, TrueDepth front-facing camera adds Face ID for payments and enables front-facing AR effects Google Assistant; unlimited cloud storage; Daydream VR-ready
last updated by 2nd November 2017.
Tags gadgets phone razer